Iyo UNIX uzivi hwadzoka mufashoni muna 2018 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo UNIX uzivi hwadzoka mufashoni muna 2018
UNIX yakanga iri sisitimu yekushandisa yakaratidzira pamberi uye shure munhoroondo yeSSOOs. Pamwe akanakisa pane ese uye kuti akasiya nhaka inoshamisa nenhengo dzake dzakasiyana dzemhuri yake huru, senge Linux, Solaris, BSD, nezvimwe Uye zvakare, yaisanganisira nhevedzano yezvinhu zvitsva zvenguva yazvo izvo zvichiri kuyemurwa, zvine hunhu hwakanyanya hwekusimudzira huzivi hunoratidzika kunge hwazova mufashoni zvakare ...
Ndinoreva imwe ye uzivi hutatu pane iyo UNIX inotsigirwa, mumwe wenyu atoziva kare kuti zvese ifaera mune ino system, uye izvo zvinosanganisirawo zvishandiso zvinogona kurapwa zvakadaro uye nekudaro zvinogona kutarisirwa nemidziyo mimwe cheteyo iyo inosara iyo inochengetwa mafaera. , chimwe chinhu chinonyanya kubatsira mune dzakawanda zviitiko uye icho chinotitendera isu kuendesa zvakare ruzivo kune kana kubva kwavari. Chinhu icho mune mamwe masisitimu anoshanda hachigone, sezvo vachibatwa semidziyo kana zvikamu, sezvazviri neWindows.
Asi huzivi hunotifadza ikozvino kuvaka mapurogiramu akareruka, ine yakanakisa kodhi uye kuti vanoita basa rimwe chete, asi kuti vanozviita nemazvo. Izvo zvinopesana zvachose nemamwe mapurojekiti esoftware uye masystem anoshanda, uko kwakaomarara zvirongwa zvakakomba zvinokwanisa kuita zvinhu zvakawanda asi zvisingaite mushe mune zvimwe zviitiko ... Kureruka dzimwe nguva ndiyo nzira yakanakisa yekugadzirisa matambudziko ehunyanzvi seUNIX yakaratidza kana mimwe mienzaniso yakawanda yatinayo mune mamwe maindasitiri (ona Hispano Suiza vs Rolls Royce).
Huye, iyo huzivi ichiripo munzvimbo zhinji dze LinuxKunyangwe distro yakanyanya kudarika Linux kernel, uye kune zvimwe zvikamu zvisingaite. Semuenzaniso, ndeimwe yekushoropodza kwakaitwa systemd, kana iwe uchirangarira. Uye ikozvino nekunetsekana kwekugona uye kufamba, kuita kwakanyanya kwakakosha uye mapurogiramu akareruka anoshanda mushe pamwe anoita kunge ave kunyanya kukosha.
Unogona kuona rumwe ruzivo mu Microservices pawebhu martinflower.com. Iko kunotsanangurwa Microservices Architecture, dhizaini nyowani yekugadzira software yakapusa isingashande pachezvayo, asi kana mapurogiramu ese akaiswa pamwechete, anova mashandiro ane hwaro hwakasimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo UNIX uzivi hwadzoka mufashoni muna 2018
Ichokwadi, systemd inoyamwa !!!!!!!